असोज १, २०७४ | अजित बराल
कक्षा सात पढ्दाको कुरा हो । मलगायत तीनजना सहपाठी स्कूलव्यापी स्पेलिङ कन्टेस्ट (हिज्जे प्रतियोगिता) का लागि छानिएका थियौं । उक्त प्रतियोगिताको तयारीका लागि हामीलाई ठूल्ठूला र जटिल शब्दहरूको एउटा सूची दिइएको थियो ।
कहिल्यै नसुनेका ‘ए’ देखि ‘जेड’ सम्मका शब्द थिए सूचीमा । सबै कक्षा÷स्कूलका तेज विद्यार्थी भएकाले हामीलाई ती शब्द मुखाग्र गर्न भने खासै गाह्रो भएन । हामीले प्रतियोगिताका अघिल्ला चरणमा राम्रो गर्दै पनि गयौं । तर अन्तिम चरणमा ‘एस’ बाट आउने एउटा शब्दको हिज्जे मैले बिगारें, हडबडाएर । मेरो त्यही गल्तीका कारण हामी पहिलो हुनबाट वञ्चित भयौं ।
प्रतियोगितामा दोस्रो भएका हामीले एक–एक वटा पेन र नोटबूक पायौं । त्यही नोटबूकमा मैले हामीलाई दिइएको सूचीका शब्द र तिनका अर्थ शब्दकोशमा हेर्दै टिप्ने विचार गरें । शायद बुबाको प्रभावका कारण त्यसो गर्ने विचार ममा आएको हुनुपर्छ ।
किनभने पुस्तक, पत्रपत्रिका पढ्दै गर्दा आफूले नजानेका शब्दहरू आए भने बुबाले ती शब्दलाई अन्डरलाइन गरेर राम्रो अक्षरमा तिनको अर्थ पुस्तक, पत्रपत्रिकाको छेउमा लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो ।
लामो समयसम्म सुरक्षित रहोस् भनेर बुबाले मोटो, कालो गाता लगाइदिनुभएको अक्सफोर्ड इङ्गलिस डिक्सनरी घरमा थियो ।
त्यसैलाई लिएर शुरू भयो, डिक्सनरी कण्ठ गर्ने मेरो कठिन यात्रा । म क्रमैसँग शब्द पढ्दै जान्थें र आफूले थाहा नपाएको शब्द आयो भने अडिन्थें । त्यसलाई हाइलाइटरले हाइलाइट गर्थें र फेरि अघि बढ्थेंं । अनि केही दिनपछि ती हाइलाइट गरिएका शब्दमा आँखा दौडाउँथे अनि तिनका अर्थ बिर्से–नबिर्सिएको हेर्थें ।
समयको यात्रामा त किन ब्रेक लाग्थ्यो र ? समय बित्दै गयो । एसएलसी आयो । पास भएँ, प्रथम श्रेणीमा । एसएलसी प्रथम श्रेणीमा पास हुनेले कलेज गएपछि प्रायः विज्ञान विषय लिन्थे । त्यसमा म अपवाद रहिनँ । एक÷दुई महीना कक्षा लिएपछि लाग्यो, विज्ञान पढेर मैले पार लाउँदिनँ । बल्लतल्ल आईएस्सी पास गरे पनि, विज्ञानमा स्नातक गर्नेवाला थिइनँ, कमर्स पढ्न थालेंं । कक्षा बिहान हुन्थ्यो । दिउँसोभरि फुक्काफाल । टाइम पास कसरी गर्ने ?
ती पुस्तक साथीहरूले पनि पढून् भनेर दिन्थें । तर, अंग्रेजी शब्दावलीमा कमजोर उनीहरू भन्थे, ‘अनुच्छेदपिच्छै शब्दकोश पल्टाउनुपर्छ के पढ्ने ?’ गाह्रागह्रुङ्गा शब्दका कारण उनीहरू पुस्तक पढ्न हच्किन्थे । म भने तिनैका कारण एकपछि अर्को पुस्तक पढ्थें । शायद नयाँ–नयाँ शब्द जान्ने मेरो चाहना ज्यूँकात्यूँ थियो । ती शब्दलाई मैले पहिले जसरी नोटबूकमा टिप्थें र तिनका अर्थ लेख्थें । पढ्दा कुनै नयाँ शब्द फेला प¥यो भने ठूलै उपलब्धि हासिल गरे जस्तो लाग्थ्यो, मानौैं मैले नयाँ शब्द होइन, सुनको स–सानो टुक्रा नै फेला पारेको हुँ । अनि म झ्न् उत्साहित हुन्थें, झ्न् धेरै पढ्थें ।
पढ्दै जाँदा लत बस्यो पढ्ने । त्यो लतमा रत्तिंदै जाँदा लेखनमोह जाग्यो ।
पढ्दै जाँदा लत बस्यो पढ्ने । त्यो लतमा रत्तिंदै जाँदा लेखनमोह जाग्यो । कतै पढेको थिएँ, लेख्न सिक्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय दैनिकी लेखन हो । मैले त्यसै गरें । प्रत्येक साँझ्, मनमा खेलेका कुरा, पढेको पुस्तक र देशमा घटेका घटनाहरू डायरीमा लेख्थें ।
यसरी अंग्रेजी शब्दहरूप्रति मेरो आकस्मिक मोहका कारण शुरू भएको अंग्रेजी सिक्ने प्रयास अझ्ै जारी छ । र, यो प्रयास तबसम्म जारी रहनेछ, जबसम्म म आफैंले लेख्न खोजेको जस्तो अंग्रेजीमा लेख्न सक्दिनँ ।